ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ နို့ဆက်တိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား.......... - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ နို့ဆက်တိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား..........
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 05/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပထမ မွေးထားတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေက ၂ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ မေမေက နောက်ထပ် ဘေဘီလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီဆိုရင် မေမေတိုင်း သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေးတစ်ခု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ၂ နှစ်မပြည့်ခင်အထိ မိခင်နို့တိုက်ပါဆိုတော့ ပထမ ကလေးကို မိခင်နို့ချို ဆက်တိုက်လို့ ရမလားဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီ ကိစ္စကို ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ နို့ဆက်တိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား…………..
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရချိန်မှာ ကလေးက နို့ဖြတ်ဖို့ အဆင်မပြေသေးတဲ့ အရွယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နို့ဆက်တိုက်ပါ၊လို့ ပြောပါရစေ။ ဒါက မေမေ့ကိုရော ဘေဘီလေးကိုပါ ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒိလိုနို့တိုက်တာ​ကြောင့် ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးဆီကို အာဟာရ ပြည့်ဝလုံလောက်စွာ မရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူး။ မေမေကသာ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားမယ်ဆိုရင် ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးလည်း အာဟာရ ပြည့်ဝမှာ ဖြစ်သလို နို့ချိုသောက်သုံးနေတဲ့ ဘေဘီလေးလည်း လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို ရရှိမှာပါ။
ဒီလိုအချိန်မှာ မေမေ့အနေနဲ့ ဂရုစိုက်ရမှာက လုံလောက်ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ ရရှိအောင်စားပေးဖို့နဲ့ အိပ်ရေးဝဝအိပ်မယ်၊ ရေဆာတဲ့အခါတိုင်း ရေသောက်မယ် စတဲ့အချက်လေးတွေကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ နို့ချိုတိုက်ကျွေးတာက ပုံမှန်ထက် ပိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရတာကြောင့်
ရင်သားထိပ် နဲ့ ရင်သားတွေ တင်းပြီး နာတာမျိုးခံစားရတာ
အရင်ကလောက် နို့မထွက်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ဒါတွေက ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြေအနေတွေပါ။
ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ နို့စို့နေတဲ့ ဘေဘီလေးက မေမေ နို့က ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး။ အရသာ ပြောင်းသွားတယ်လို့ ပြောတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လရင့်လာလေလေ နို့အရသာက ပြောင်းလာလေလေဖြစ်မှာပါ။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ မေမေ့နို့ကို သောက်သုံးနေတဲ့ ကလေးကို တစ်စုံတစ်ခု ထိခိုက်စေတာမျိုး မရှိစေနိုင်ပါဘူး။
မွေးဖွားခါနီးလာလေလေ နို့က အရည်ပျစ်ပြီး အဝါရောင်သန်းလာလေလေဖြစ်လာပါမယ်။ ဒါကလည်း အရသာ ပြောင်းရုံကလွဲလို့ အာဟာရပါဝင်မှု လျော့မသွားသလို ကလေးကိုလည်း ထိခိုက်မှု တစ်စုံတရာ မဖြစ်စေပါဘူး။
အချို့ မေမေတွေက ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ ပထမကလေးကို နို့တိုက်တာက လမစေ့ဘဲမွေးတာမျိုး ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရချိန်မှာ နို့တိုက်တာက ကိုယ်တွင်းမှာ အောက်ဆီတိုစင် ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်လွှတ်မှုက သားအိမ်ကျုံ့ဆန့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ နို့ချိုထွက်နှုန်းကိုတော့ နည်းနည်း နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် ၄ လ၊ ၅ လလောက် ရောက်တဲ့အခါ နို့ထွက်တာက တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားပါမယ်။ ဒါကလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးကို မွေးဖွားပြီးချိန်မှာတော့ ပထမ ကလေးကို မဖြစ်မနေ မိခင်နို့ဖြတ်ရပါမယ်။ ဒါမှ ဘေဘီ ပိစိလေးက မိခင်နို့ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိပြီး အကောင်းဆုံး ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုး မှာပါ။
သတိထားရမယ့် အခြေအနေတွေက ဘာတွေများလဲ……………….
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ခြေ ရှိနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိနေရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အတူမနေဖို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ
ဒါဆိုရင်တော့ နို့ဆက်တိုက်သင့် မတိုက်သင့်ကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါမယ်။
Is it safe to breastfeed during pregnancy? https://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-breastfeed-during-pregnancy_8935.bc Accessed Date 1 April 2020
5 Important Tips for Breastfeeding While Pregnant https://www.medela.us/breastfeeding/articles/5-important-tips-for-breastfeeding-while-pregnant Accessed Date 1 April 2020
Breastfeeding During Pregnancy: Safety and Challenges https://americanpregnancy.org/breastfeeding/breastfeeding-while-pregnant/ Accessed Date 1 April 2020
Is it safe to breastfeed while pregnant? https://www.pregnancybirthbaby.org.au/breastfeeding-while-pregnant Accessed Date 1 April 2020